သီချင်းအမျိုးအစားကဘာလဲ YOUTUBE ကိုပေါ်သုံးနိုငျ - YOUTUBE ကို - 2019
နေ့စွဲစေရန်, YouTube ကို - မသာအခြားလူများ၏ဗီဒီယိုကြည့်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးဆိုက်ဖို့ upload လုပ်နိုင်စွမ်း။ ဒါပေမယ့်ဂီတကိုပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခံရမဟုတ်လားရှောင်ရှားရန်သင်၏ video သို့အဘယ်အရာကိုဖြည့်စွက်ရနိုင်သနည်း ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်မှာရှိ Youtube ကိုအခမဲ့နှင့်ဥပဒေရေးရာလမ်းကြောင်းရှာတွေ့ဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
YouTube ပေါ်မှာ clip မှပိတ်ဆို့မထားဘူး, ဒါကြောင့်အောက်ပါအခြေခံမူကနေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်:
ခွင့်ပြုချက် (လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူ) နဲ့ဂီတကိုသုံးပါ။
ဒါကအသုံးပြုသူ $ 50 ပဲကုန်ကျ, ဒါမှမဟုတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်အပေါင်းတို့အားလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ဖြစ်သင့်သောဤလမ်းကြောင်းများအတွက်လိုင်စင်ရှိရမည်သင်၏ video အသံဖိုင်ထည့်ဖို့ဆိုသည်ကားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့နှင့်ဥပဒေရေးရာဂီတရှာဖွေရန် Youtube, နှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုများကဲ့သို့အထူးရေးကိရိယာများရှိပါသည်။ Next ကိုငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနဲ့ YouTube ပေါ်တွင်သင်၏ဗီဒီယိုများအတွက်အပုဒ်ကို download လုပ်နိုင်သည့်အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးနည်းလမ်းများမှာကြည့်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: YouTube ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 1: YouTube ကိုအသံစာကြည့်တိုက်
Yutuba ဂီတစာကြည့်တိုက် - အခမဲ့သီချင်းများနှင့်အသံ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်သီချင်းတွေကိုဥပဒေနှင့်မူပိုင်ခွင့်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ဤအရင်းအမြစ်များထံမှပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း, ဗီဒီယိုရေးသားသူအပြည့်အဝ, သူ့အလုပ်၏သော့ခတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ဂီတစာကြည့်တိုက်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့, Youtube, အောက်ပါပြုပါ:
အတွက် Log "အကောင့်"။ မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်၌သင်တို့၏ကိုယ်ပွားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်ကို select "Youtube ကိုကို Creative စတူဒီယို".
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခြားသူများက" - "ဂီတစာကြည့်တိုက်".
ကျနော်တို့နေတဲ့အကြိုက်ဆုံး option ကိုရွေးချယ် Download ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အပိုင်းကိုဖွင့်။
အသုံးပြုသူလည်းထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစား, ခံစားချက်, အရှည်, ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဖြစ် filter ကို parameters တွေကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
အနုတ်စာကြည့်တိုက် Yutuba သည်ဤရေးစပ်သီအများအပြားကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများကအသုံးပြုနေကြကြောင်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကမကြာခဏကြားရနိုင်ပြီး, တချို့ငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာကြပါပြီ။ အသုံးပြုသူကိုမူလနှင့် maloproslushivaemye ပုဒ်ကိုရှာဖွေလိုလားလျှင်, ကဝန်ဆောင်မှု SoundCloud သုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။
Method ကို 2: SoundCloud
မည်သည့်အသုံးပြုသူကသူတို့ရဲ့သီချင်းတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့သူတွေကိုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစာရေးဆရာများကတေးဂီတရေးစပ်၏လူကြိုက်များဖြန့်ဖြူး။ ဒီ site များအတွက် Creative Commons လိုင်စင်အပေါ်တစ်ဦးအမှတ်အသားလည်းမရှိ။ ဒါဟာဂီတအကျိုးဆက်များမရှိဘဲသင်၏ဗီဒီယိုများအတွက်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။
သင့်လျော်သောဖိုင်ကို download လုပ်ပါဖို့အောက်ကခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ:
Creative Commons နှင့်အတူမှတ်သားမဆိုသီချင်းကိုရှာပါ။
အဆိုပါ browser ကိုအလိုအလြောကျတဦးတည်းကိုပိုမို tab ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်နေရာလွတ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အသံအမျှ ... ".
ဖိုင်တွဲထဲတွင်ဖိုင် Save နှင့်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုများအတွက်သုံးပါ။
Android ပေါ်မှာဂီတဒေါင်းလုပ်များအတွက် Applications ကို
Method ကို 3: Audiojungle
ဒီဝန်ဆောင်မှုပုဒ်လိုင်စင်အပေါ်ဝယ်ယူနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်အတွက်၎င်းတို့၏နောက်ထပ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သီချင်းနှုန်း $5မှာစတင်သည်။ အဆိုပါ site ကိုကံမကောင်းရုရှား, ဒါပေမယ့်အလိုလိုသိသို့ဘာသာပြန်ထားသောဘူး။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဝယ်ယူရန်ရုံလှည်း icon ကို click ပါနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုစတိုးဆိုင်လိုက်နာပါ။
အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများနှင့်ပညာရှင်များအကြားရေပန်းစား Audiojungle, ဒီ website တွင်အဖြစ်, သင်မူရင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်အလုပ်ရှာခြင်းနှင့်အပြည့်အဝအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုစာရေးဆရာပိတ်ဆို့ဖို့စွမ်းရည် မှလွဲ. သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ရရှိနိုင်သည်။
Method ကို 4: ပြည်သူ့နှင့်အုပ်စုများနှင့်အခြားလူမှုကွန်ယက် VKontakte
လူမှုရေးကွန်ရက်များတွင်မူပိုင်ခွင့်မရှိဘဲသီချင်းတွေကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးကိုဖြန့်အများအပြားအုပ်စုများရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သတိထားရ: အပုဒ်လိုင်စင်ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့အပြည့်အဝအာမခံချက်မဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်သုံးစွဲသူကိုအသုံးပြုသည်ထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 5: သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူဂီတနည်းနည်း-လူသိများစာရေးဆရာများ
ဒီနည်းလမ်းကိုပြီးနောက်အသုံးပြုသူအနည်းငယ်-လူသိများတေးရေးဆရာသူ့ကိုအတူစာချုပ်သို့ဝင်သောနှင့်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုသူ့ရဲ့ဂီတကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အားသာချက်ထိုကဲ့သို့သောအနုပညာရှင်များအလုပ်မကြာခဏအတော်လေးမူရင်းနှင့်အမည်မသိပရိသတ်ကို YouTube ကိုအချက်ကိုတည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အချို့အကြောင်းအရာများ-ထုတ်လုပ်သူအသံရှာဖွေနေ၏ဤလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။
Method ကို 6: ဥပဒေရေးရာဂီတဒေါင်းလုပ်အခြားပေါ်ပြူလာန်ဆောင်မှုများ
ဤဆိုဒ်များပါဝင်သည်: Jamendo, ငွေ, Music, Ccmixter, Shutterstock, ပျံ့နှံ့အသံ။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခြုံငုံသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပြောင်းပါဘူး - ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်သူကဤအရင်းအမြစ်များ၏စာကြည့်တိုက်များကနေအပုဒ်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကမဝယ်သို့မဟုတ်အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Method ကို 7: မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တွင်တေးဂီတ Writing သို့မဟုတ်အမိန့်မှ
မျှမျှတတရှုပ်ထွေးပြီးအကုန်အကျဖြစ်စဉ်ကို, ဒါပေမယ့်ဂီတအားလုံးကိုအခွင့်အရေး, ဗီဒီယိုနှင့်လမ်းကြောင်း၏ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင်းယင်း၏စာရေးဆရာ, ပိုင်။ အခြားလူများအနေဖြင့်မိန့်လိုက်တဲ့အခါအသုံးပြုသူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းမှုသုံးစွဲဖို့အားလုံးအခွင့်အရေးကိုမှတ်ပုံတင်ထားပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာစာချုပ်ထဲသို့ဝင်ရပါမည်။
ကယေဘုယျတွင် YouTube ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်သံလိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားအကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်နိုင်မအတော်လေးလေးနက်ရောဂါဖြစ်ပါသည် - မူပိုင်၏လျှောက်လွှာဆိုတာသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်, ဂရုတစိုက်သူတို့၏စာရေးဆရာနဲ့လိုင်စင်ပုဒ်မှရှိပါတယ်စစ်ဆေးသည်, မိမိအလုပ်အတွက်ဂီတကိုရှာပါ။
ဗီဒီယို Watch: El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks Official Video Ultra Music (အောက်တိုဘာလ 2019).